Tsamba kuvaKorose 3:1-25
Unhu hwekare uye unhu hutsva (1-17)
Urayai nhengo dzemiviri (5)
Rudo, chisungo chakakwana chekubatana (14)
Zano kumhuri dzechiKristu (18-25)
3 Asi kana makamutswa pamwe chete naKristu,+ rambai muchitsvaga zvinhu zviri kumusoro, kuna Kristu agere kuruoko rwerudyi rwaMwari.+ 2 Pfungwa dzenyu ngadzirambe dziri pazvinhu zviri kumusoro,+ kwete pazvinhu zviri panyika.+ 3 Nekuti makafa, uye upenyu hwenyu hwakavanzwa pamwe chete naKristu muri pamwe naMwari. 4 Kristu, anova ndiye upenyu hwedu,+ paanoratidzwa pachena, imiwo mucharatidzwa pachena pamwe chete naye mukubwinya.+ 5 Saka urayai nhengo dzemiviri yenyu dziri panyika+ pazvinhu zvakadai seupombwe,* kusachena, chishuwo chisingadzorwi chekuda zvebonde,+ kushuva zvakaipa, uye kuva nemakaro, kunova kunamata zvidhori. 6 Hasha dzaMwari dziri kuuya pamusana pezvinhu izvi. 7 Imi maimbozvibatawo saizvozvo* mumararamiro enyu ekare.+ 8 Asi iye zvino munofanira kubvisa pamuri zvese zvinoti: hasha, kutsamwa, uipi,+ kutuka,+ uye kutaura nemiromo yenyu mashoko anonyadzisira.+ 9 Musareverana nhema.+ Pfekenurai unhu hwekare*+ nemabasa ahwo, 10 mupfeke unhu hutsva,+ huri kuitwa hutsva kuburikidza neruzivo rwakarurama maererano nemufananidzo weuya akahusika,+ 11 pasina kuti kune muGiriki kana muJudha, kuchecheudzwa kana kusachecheudzwa, mutorwa, muSitiya,* muranda, kana munhu akasununguka; asi Kristu ndiye zvinhu zvese uye ari mavari vese.+ 12 Saka sevanhu vaMwari vakasarudzwa,+ vatsvene uye vanodiwa, pfekai rudo rwakadzama muchinzwirana tsitsi,+ mutsa, kuzvininipisa,*+ unyoro,+ nemwoyo murefu.+ 13 Rambai muchinzwisisana uye muchiregererana nemwoyo wese*+ kunyange kana paine ane chaakatadzirwa nemumwe.+ Sezvo Jehovha* akakuregererai nemwoyo wese, imiwo itai saizvozvo.+ 14 Asi kuwedzera pazvinhu izvi, pfekai rudo,+ nekuti irwo chisungo chakakwana chekubatana.+ 15 Uyewo, rugare rwaKristu ngarutonge mumwoyo menyu,+ nekuti makashevedzerwa rugare irworwo mumuviri mumwe chete. Uye ratidzai kuti muri vanhu vanoonga. 16 Shoko raKristu ngarinyatsogara mamuri muuchenjeri hwese. Rambai muchidzidzisana uye muchikurudzirana* nemapisarema,+ nenziyo dzekurumbidza Mwari, nenziyo dzemweya dzinoimbwa muchionga, muchiimbira Jehovha* mumwoyo menyu.+ 17 Zvese zvamunotaura kana kuita, zviitei zvese muzita raShe Jesu, muchionga Mwari Baba nekwaari.+ 18 Imi madzimai, zviisei pasi pevarume venyu,+ sezvo zviri izvo zvakakodzera munaShe. 19 Imi varume, rambai muchida madzimai enyu+ uye musaashatirirwa.*+ 20 Imi vana, teererai vabereki venyu nguva dzese,+ nekuti izvi zvinofadza Ishe zvikuru. 21 Imi vanababa, musashungurudza* vana venyu,+ kuti varege kuora mwoyo. 22 Imi varanda, teererai vanatenzi venyu panyama nguva dzese,+ kwete chete pavanenge vachikuonai, muchingoitira kufadza vanhu, asi nemwoyo wese, muchitya Jehovha.* 23 Zvese zvamunoita, zviitei nemweya* wese sekunge muri kuitira Jehovha,*+ kwete vanhu, 24 nekuti munoziva kuti Jehovha* ndiye achakupai nhaka semubayiro.+ Shandirai Tenzi, iye Kristu. 25 Uya anoita zvakaipa achatowana mubayiro wake wezvakaipa zvaakaita,+ uye hapana rusarura.+
^ Kana kuti “Aya ndiwo mafambiro amaimboitawo.”
^ ChiGir., “munhu wekare.”
^ Shoko rekuti “muSitiya” raishandiswa kuvanhu vaionekwa sevakasaririra.
^ Kana kuti “kuzvirereka.”
^ Kana kuti “muchingoregererana.”
^ Kana kuti “muchirayirana.”
^ Kana kuti “musaabata nehasha.”
^ Kana kuti “musatsamwisa.”